Amalungiselelo Instrument Of Cryoprecipitated Antithemophilic Iimeko - China Shandong Zhongbaokang Medical
Oku kusetyenziswa kwizikhululo igazi, izibhedlele kunye neeyunithi uphando igazi ukunyibilika plasma entsha tyaba nokulungiselela Cryoprecipitated Antihemophilic Izimo.
Iingcango iya kuvulwa kwi kokubini ngaphambili umva omabini, umsebenzi eziliqela unako ukusebenza ngexesha elinye, ukuphucula ukusebenza umsebenzi.
inkqubo elula kunciphisa ubunzulu yabasebenzi abasebenzi
indoda-umatshini intsebenziswano le relized yi zamatye entlabathi.ame phezu ubungakanani enkulu kwaye Buyiphucula abasebenzi intuthuzelo yokusebenza.
amandla Ixesha kwi ukuba precool kwaye ungacwangcisa iyunithi multiple-ixesha isiqalo stop.
Zenzekelayo emanzini-zezondlo precool oluzenzekelayo emva kokuba lithe inqanaba lamanzi setting
Ukhankase gun ukuskena, uyakwazi ukufunda kunye nabasebenzisi ukufikelela, iinkcukacha kwingxowa igazi.
Inkqubo alungiselelwe phantsi kweliso-time and yokugcina
siphoning Automatic plasma
Ukhankase uhlaziya sensor
Lobushushu bath Water: parameter : 1-6 ℃
Amanzi bath ibhokisi volume ≦ 50L
indlela yokunyibilika Plasma: bath amanzi
Power Lilonke: ≦ 2500w
Ukulungiselela ubungakanani: ≦ iingxowa 30
ubunzima Lilonke: ≦ 500kg
ubungakanani Ngaphandle: 1790 × 850 × 1750mm (L × W × H)
Previous: Medical Low Platform Operating Ubushushu